RW Abiy Axmed oo wacad ku maray in uu tallaabo ka qaadi doono dadkii dhaliyay rabshadaha - Halbeeg News
RW Abiy Axmed oo wacad ku maray in uu tallaabo ka qaadi doono dadkii dhaliyay rabshadaha
ADDIS ABABA (HALBEEG)- Sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliiska Itoobiya 23 qof ayaa ku dhimatay rabshado dib uga qarxay gobolka Oromadu ay degto gaar ahaan duleedka magaalada Addis Ababa.
Rabshadahan ayaa lagu beegsanayaa dadka laga tirada badan yahay ee ku nool duleedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Rabshadaha ayaa ku soo beegmay xilli ay socdeen dibad baxyo lagu soo dhoweynayo jabhadda OLF oo tobonaan sano dalka Itoobiya kaga maqneyd masaafuris iyagoo soo laabashadooduna ay timid kadib markii dowladda ay la galeen heshiis.
Wakaaladda wararka ee dowladda Itoobiya ee Fanna ayaa sheegtay in illaa 400 oo qof loo soo xiray rabshadaha ka dhacay gobolka Oromada gaar ahaan duleedka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Raiisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa si kulul u canbaareeyay rabshadaha ka dhacay gobolka Oromada wax uuna sheegay in ay jawaab deg deg ah ka bixin doonaan.
“Weeraradan fulaynimada ah wax ay u taagan yihiin welwel weyn oo ku wajahan midnimada iyo isku kalsoonaanta dadkeenna wax ayna la kulmi doonaan jawaabta haboon” ayuu yiri Raiisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed.
Kadib bannaan baxayo sanadihii u danbeeyay ka dhacay Itoobiyay ayaa keenay in isbedel weyn uu ka dhacay dalka Itoobiya taasoo keentay in Abiy Axmed oo kasoo jeeda qowmiyadda Oromada uu markii ugu horeysay Raiisul wasaare ka noqdaan dowladda Itoobiya.
Xafiiska xeer ilaalinta Puntland oo sheegay in ay diwaangeliyeen 48 kiis oo kufsi ah